နှင်းဟေမာ: နှုတ်ဆက်တေး ...
“ ချစ်သူ ရေ............
အဆုံးအစမဲ့ မင်းပျံသန်းပါ ..........။
ဘ၀မှာ စိတ်ပျက်အားငယ်စရာတွေနဲ့ ကြုံရင်
ဘယ်တော့မှ အပြုံးမပျက်ပဲ ...
Thank you လို့ နောက်ဆုံးပြောခဲ့ပြီး ... ကျောခိုင်းသွားခဲ့သူ တစ်ယောက်အတွက် ... နှုတ်ဆက်တေးတစ်ပုဒ်ကို ကျမ ကြေကွဲစွာ ရေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်...။ ဒီတေးလေးမဆုံးခင်မှာပဲ သူ ...ကျမ အနားကိုပြန်ရောက် လာခဲ့ပါတယ် ... ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျမ သူ့ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ... Thank You နော် ...း)
ကဗျာအရှည်ကြီးကို မျှဝေခံစားပေးကြသော ကျမရဲ့ မောင်နှမအားလုံးကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်း)
( စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်း သီးခံပါးD )
Posted by မင်္ဂလာပါ .... at 11:55 PM
နှင်းရေ.. ကဗျာလေးလာဖတ်သွားပါတယ်။ အဆင်ပြေပျော်ရွှင်ပါစေနော်။ thank you ပါ။း))
အောက်ကနေ စရေတယ်၊ ငါးခုမြောက်ပိုဒ်ကို ခံစားရေးပုံသိချင်တယ်၊ သီးခံ၍မေးခြင်းပါကွယ်
မေးမလို့ လုပ်တုန်းဘဲ ရှိသေး။ စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်း သီးခံပါတဲ့။
နှုတ်ဆက်တေး မဟုတ်ဘဲ.. အမွေပြတ်ပါ ကြော်ငြာလိုက်သလိုဘဲ... :P :P :) :)...
စတာနော် နှင်း။ ကဗျာအရှည်ကြီးမို့ တစ်ပိုဒ်ဖတ်..တစ်ခါနား..တစ်ခါခံစား။ နောက်တစ်ပိုဒ်ဖတ်..နောက်တစ်ခါနား..နောက်တစ်ခါခံစား.... :) :)...
နှုတ်ဆက်တေးကလဲ မောနေအောင် ဆိုရတယ်... နှုတ်ဆက်တာဘဲ နှင်းရယ်... "တ တာ.." ဆို ပြီးရော...
နောက်တစ်ခါ Thank You ပြောခံရရင်တော့ ကိုမျိုးပြောသလို တာ့ ..တာ ပဲ လုပ်လိုက်တော့မယ်နော်
နှုတ်ဆက်တေး အစွမ်းတော်တော်ထက်တယ်နော်. နည်းပေးပါဦး မေတ္တာဖြင်. .....
ဒါတွေက တွေ့ကြုံနေကျမို့လို့ သိပ်တော့ မဆန်းတော့ပါဘူး
နူတ်ဆက်ခဲ့တဲ့လူ ပြန်လာပြီ မဟုတ်လား ပျော်စရာပေါ့ကွာ။
အဟင့် နုတ်မဆက်နဲ့ ငိုချင်တယ်းP
နောက်တာနော်။ ညလေး နှင်း အဆင်ပြေပျော်ရွှင်ပါစေနော်..
ခံစားချက်နှင့်ရေးဖွဲ့ထားတာမို့ ရေးဖွဲ့နေတုန်း ဘယ်လောက် ခံစားပူလောင်နေမလဲ ဆိုတာ သဘောပေါက်ပါတယ်။ အဆင်ပြေသွားပြီဆိုတော့လဲ ၀မ်းသာပါတယ်။ ပျော်ရွှင်ကြည်နူးနိုင်ကြပါစေ။
ကဗျာလေးကောင်းတယ် ညီမလေးရယ်။ အဆုံးသတ်ဖတ်ရတာလည်း ပျော်စရာကောင်းတယ်...